I-Canada yeKharityhulam yeMbali kunye neRekodi zeRhafu kwi-Intanethi
Ubukho behlabathi bethandwa abaninzi abafuduka eKhanada, benza iirekhodi zomhlaba ezinye iirekhodi zokuqala ezifumanekayo ukuphanda iikholeji zaseCanada, ngaphambi kokubalwa kwabantu kunye neengxelo ezibalulekileyo. Kwimpuma yeKhanada le ngxelo ivela emva kwexesha lama-1700. Iintlobo kunye nokufumaneka kweerekhodi zomhlaba ziyahluka ngokwephondo, kodwa ngokuqhelekileyo uza kufumana:
Amarekhodi abonisa ukuhanjiswa kokuqala komhlaba ukusuka kurhulumente okanye isithsaba kumnini wokuqala, kubandakanywa iziqinisekiso, izipho, izikhalazo, izibonelelo, amalungelo omenzi kunye namakhaya. Ezi zidla ngokubanjelwa kwii-archives zikazwelonke okanye zephondo, okanye ezinye iifasta zorhulumente zengingqi.
Intsebenziswano yomhlaba elandelwayo phakathi kwabantu njengemisebenzi, iimali zokubolekwa kwemali, izibambiso, kunye nokuyeka izicelo. Ezi rekhodi zomhlaba zifumaneka ngokubanzi kwi-registry yomhlaba okanye iiofisi zetayitile yomhlaba, nangona abantu abadala befumaneka kwiindawo zokugcinwa kweengxelo zephondo kunye noluntu.
Iimephu zeembali kunye nama-atlasi abonisa imida yepropati kunye namagama abanikazi bomhlaba okanye abahlali.
Iirekhodi zerhafu zepropati, ezifana nokuhlola kunye nabaqokeleli, zingabonisa inkcazelo yomthetho yendawo, kunye nolwazi kumnini.
Umzi wasekhaya waseFransi waqala eCanada malunga neminyaka elishumi kamva kunase-United States, ukukhuthaza ukunyuka kweentlabathi kunye nokuhlala. Ngaphantsi kwe-Dominion Lands Act ka-1872 umntu ohlala ekhaya uhlawule iidola ezili-10 kwiihektare eziyi-160, kunye nemfuneko yokwakha ikhaya kunye nokuhlakulela inani elithile lamahektare kwiminyaka emithathu. Izicelo zasekhaya zingakunceda kakhulu ukulandelela imvelaphi yokufudukela kwamanye amazwe, ngemibuzo malunga nelizwe lokuzalwa lomhlaba wesicelo, ukuhlulwa kwelizwe lokuzalwa, indawo yokuhlala yokuhlala, kunye nomsebenzi wangaphambili.
Izibonelelo zomhlaba, iirekodi zomakhaya, iirekhodi zeerhafu, kunye neengxelo zengxelo zifumaneka kwi-intanethi kwiidolophu nakwamaphondo aseCanada ngokusebenzisa imithombo eyahlukeneyo, ukusuka kwimimandla yoluntu yoovimba beengingqi kunye nolondolozo lwengingqi. EQuebec, ungayigxothi iirekhodi zeerarial zezenzo ezirekhodiweyo kunye neentlupheko okanye ukuthengiswa komhlaba.
IThala leeNcwadi kunye neeNkcukacha zeCanada
Isalathiso esicatshungulwayo kunye nemifanekiso echanekileyo yokucela izibonelelo okanye ukuqeshisa komhlaba kunye nezinye iirekhodi zolawulo kwiCanada ephantsi, okanye yintoni ekhoyo namhlanje kwiQuebec. Esi sixhobo sophando lwe-intanethi kwi-Library kunye ne-Archives Canada sinikeza ukufikelela kuma-95,000 okubhekisela kubantu ngabanye phakathi ko-1764 no-1841.
Izicelo zoMhlaba zase-Upper Canada (1763-1865)
Iilayibrari kunye ne-Archives Canada inika le nkcazelo yehhala, yokukhangela izikhalazo zeemfuno okanye iziqeshiso zomhlaba kunye nezinye iirekhodi zokulawula ezibhekiselele kubantu abangaphezu kwama-82,000 abahlala kwi-Ontario namhlanje phakathi kwe-1783 no-1865.
Izibonelelo zeMhlaba, i-1870-1930
Olu lathiso kumhlaba izibonelelo ezenziwe kubantu abenza iimfuno zabo eziyimpumelelo kwi-patent yabo yokuhlala, banikeza igama lomntu oncedisayo, inkcazo yomthetho yendlu, kunye nolwazi lokugcinwa kwengxelo. Iifayili zezindlu kunye nezicelo, ezifumaneka kwii-archives zephondo ezahlukeneyo, ziqulethe ulwazi oluthe nkcukacha ngokubanzi malunga nabahlali bezindlu. Kaninzi "
I-Canada Pacific Railway Land Sales
I-Glenbow Museum yaseCalgary, e-Alberta, inokwakheka kule nkcazelo ye-intanethi kwiirekhodi zokurekhoda kweentengiso zelizwe lezolimo ngeCanada Pacific Pacific (CPR) ukuya kubahlali eManitoba, eSaskatchewan, nase-Alberta ukusuka ngo-1881 ukuya ku-1927. Ulwazi luquka igama lomthengi, Inkcazelo yomthetho yomhlaba, inani lamahektare athengwe, kunye neendleko nganye ngehektare. Ukukhangela ngegama okanye inkcazelo yomhlaba esemthethweni. Kaninzi "
I-Alberta i-Homestead Records Index, 1870-1930
Izalathisi-magama zonke kwiifayile zasemakhaya eziqulethwe kwii-686 ze-microfilm kwi-Archives yePhondo ye-Alberta (PAA). Oku kubandakanya amagama abo kuphela abafumana i-patent yokuhlala yasekhaya (isihloko), kodwa nabo banesizathu esithile abangazange bazalise inkqubo yokuhlala ekhaya, kunye nabanye abaye babandakanyeka kulo mhlaba.
Iincwadi zeRejista zeRejista zaseNew Brunswick, 1780-1941
I-FamilySearch ithumele iikhompyutheni ezenziwe ngekhompyutheni yeekhawuntsi kunye neencwadi zokugcina iincwadi kwiPhondo laseNew Brunswick. Iqoqo liphequlula-kuphela, lingasetshenziswanga; kwaye isakongezwa. Kaninzi "
I-Database ye-Grantbook yaseNew Brunswick
IiNcwadi zoLondolozo zePhondo zaseNew Brunswick zondla le nkcukacha yesiseko samahhala kwiirekhodi zokuhlala komhlaba eNew Brunswick ngeli xesha le-1765-1900. Khangela ngegama lomnini-mali, okanye kwindawo okanye indawo yokuhlala. Iikopi zezibonelelo ezifumanekayo kule nkcukacha zifumaneka kwi-Archives yePhondo (iintlawulo zingafaka isicelo). Kaninzi "
I-Saskatchewan Homestead Index
ISaskatchewan Genealogical Society yakha le datha yefayile yefayile yehhala kwiifolda zasekhaya zaseSaskatchewan, kunye neengxelo ezingama-360,000 kula madoda nabasetyhini ababambe iqhaza kwinkqubo yomakhaya phakathi kwe-1872 no-1930 kwindawo ekuthiwa yiSaskatchewan. Kwakhona baquka abo bathengiweyo okanye bathengise iNtshona West Métis okanye i-script yaseMzantsi Afrika okanye amajoni efumana amajoni emva kweMfazwe Yehlabathi. Kaninzi "
Kutheni kungabikho Ubalo lwabantu abangu-1890?
IiRekodi zeVital US
I-Louisiana Vital Ingxelo: Ukuzalwa, Ukufa kunye neMitshato
Ukukhwankqiswa kweHalloween: Ibali lokunyamezela nokuhleka
5 Iingcamango ezilula zokucobisa i-Beltane
UDiana, uThixokazi ongumRoma we-Hunt
IYunivesithi yaseHawaii i-Admissions College
Magical Crystals namaGemstones
Iingoma ezi-10 ezigqwesileyo zokugqibela kwizifundo ze-2013
I-Biography kaJuan Sebastián Elcano
Iifomula zeIonic Compounds
Amanqaku aBafazi aBaziwayo beVedic India
Unembeza, Unonophelo, kunye noNcedo
Inkcazo yeFomula elula
Iintsika ezintlanu ze-Islam
Indlela yokudibanisa "Umqhubi" (ukuwela) ngesiFrentshi